Kuqhubuke umsindo kuvotwa eLimpopo kulandela ukukhala kweselula yendoda | News24
Kuqhubuke umsindo kuvotwa eLimpopo kulandela ukukhala kweselula yendoda
Malamulele - Amaphoyisa aseLimpopo asevalele esitokisini abasolwa abathathu esigodini saseXigalo ngaphandle kwaseMalamulele ngamacala okubalwa kuwo ukushaya iphoyisa, ukuzama ukubulala, ukuphambana nomthetho wezoKethotho nokucekela phansi impahla.
Ngokusho kalowo okhulumela amaphoyisa aseLimpopo uColonel Ronel Otto, indoda eneminyaka engu-26 ubudala phakathi kwalabo ababoshiwe ibiyovota esikoleni iXigalo Primary ngesikhathi kukhala iselula yayo.
"Kufike indoda ebiyovota, ngesikhathi siavota kukhale iselula yayo yayiphendula. Owe-IEC wayitshela ukuthi akavumelekile ukuphendula iselula ngaphakathi endaweni yokuvotela," kusho u-Otto.
Ngokusho kuka-Otto kuqbe sekuqhubuka ingxabano kwabizwa amaphoyisa.
OLUNYE UDABA: Kdutshulwe iphoyisa esikhungweni sokuvota
"Afice iqulu labantu, azama ukulihlakaza kwase kuqala enye ingxabano. Leli qulu libe seliqala lihlasela amaphoyisa ngamatshe laze lakwazi nokuhlwitha isibhamu sephoyisa kwelinye iphoyisa ashaya elinye," kusho u-Otto.
Kube sekuqhuma isibhamu emoyeni.
U-Otto uthe oyedwa wabasolwa ubaleke nesibhamu sephoyisa wajahwa ngelinye iphoyisa ngeveni yamaphoyisa. Umsolwa wabe esesilahla.
"Isibhamu sitholakele. Iphoyisa lihlulekile ukulawula iveni layoshayisa uthango kwalimala nowesifazane obehamba ecelebni komgwaqo," kusho u-Otto.
Lo wesifazane olimele uphuthunyiswe esibhedlela iMalamulele la okubikwe khona ukuthi usesimeni esikahle.
U-Otto uthe kuboshwe abasolwa abathathu, amadoda amabili aneminyaka engu-26 neneminyaka engu27 ubudala nowesifazane oneminyaka engu-40 ubudala.
Isimo sibe sesibuyela esimeni kwaqhubeka ukuvota ngemuva, amaphoyisa abebandakanyeka kulesi sigameko awazange alimale.